Mboleko evela ngetyala olujikelezayo ukuya mboleko ikhadi na? Ndinike?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Mboleko evela ngetyala olujikelezayo ukuya mboleko ikhadi na? Ndinike?
Nditsho ke lokuhlawula olujikelezayo ngetyala embindini, ukuba ufumane indawo mboleko yamaziko zemali, unako refinance-mboleko ikhadi. Noko ke, kunokuba ukulondoloza isakhelo, ukuba ufumene imali-mboleko kwisakhelo ezivenkileni, ngokuba akukho elingenakuba nako refinance, makhe sihlolisise kwangaphambili.
Ukongeza, ngaphandle mboleko ikhadi jikelele, izixhobo zemali eziye zibizwa ngokuba "ukudityaniswa kwetyala" Kwakhona ozakuthathwa ukhetho eziphambili mboleko kuyo. A ukudityaniswa kwetyala, xa uthe wenza kwaimpatho kumaziko ezininzi zemali, libhekisela mboleko, ezifana nezo kuthwa kuyiwa lokuhlawula enye. Ngenxa yokuba nazo mboleko ikhadi basikelelwa kunye nohlobo ukudityaniswa kwetyala khona, abo bafumana mali evela kumaziko ezininzi zemali, makhe sijonge ukuba mboleko ezinjalo.
refinance xa kukho iyafaneleka? Xa refinance
olujikelezayo ngetyala kwi-mboleko khadi, kukho kungenzeka ukuba bacinezelwa isixa lokuhlawula imali. Ngokomzekelo, ekubeni mboleko yebhanki-card ukuba amazinga enzala asezantsi xa kuthelekiswa ezifana nemali yabathengi, oko kuya kunceda ukugcina inxenye umdla. Ukongeza, ezinye amaziko ezemali kuya kukhokelela nokubasindisa uthumo.
kunjalo, kuba njani intlawulo enkulu okanye imali iya kutshintsha, kuxhomekeke ekukhutshweni kwemali indawo kwamaziko zemali. Ngenxa yesi sizathu, ngokukodwa ukuze akwazi utshintsho kwi imali lokuhlawula imali, makhe ngenyameko ukuze ukhethe indawo yezemali amaziko zemali.
ukuba "intlawulo ongenza", nina nithi ukuba amancedo ekufuneni imali. Kwaye uye wafumana mali evela kumaziko ezininzi zemali, ukususela multiple ngenyanga zemigaqo ukufikelela ikhaya, kuya kuba nzima ukuba baqonde imeko ukusetyenziswa kunye imeko intlawulo. Ngoko ke, esebenzisa ukudityaniswa kwetyala, ukuba kunokwenzeka ukuba ukudibanisa intlawulo, kuya kuba lula ukwenza isicwangciso intlawulo.
[su_note note_color = "# ffffff"] _ x000D_ ajikelezayo ngetyala. Ikhadi mboleko ukuze ube yindawo
olujikelezayo ngetyala kumnatha iphepha phezulu Siya angenise inani elikhulu. Kungenxa kwiimeko ezininzi kuba nako refinance, kodwa kuluncedo itrayi ukuze ubuze xesha.
[/ su_note] Kufuneka kuqatshelwe xa
refinance na? Ngu
mboleko indawo yamaziko zemali, iinkonzo ezahlukeneyo ezidityaniswe mali-mboleko. Umzekelo, iinkonzo ezifana nokunciphisa-mali kunye nomdla izinga kwinqanaba zingabonakala, kodwa imixholo inzuzo inkonzo mkhulu ngabantu ziya kwahluka. Ngoko ke, ngokuqinileyo siqonde imixholo inkonzo yeziko mali ngamnye ukuze uqinisekise ukuba ukhethe lwamancedo kuyo mboleko enkulu kum.
ngexesha, naye wabona iinkonzo mboleko ezifana abasebenzi kumaziko zemali kunye nengcebiso malunga nesicwangciso intlawulo ifakiwe. Ukuba uziva ixhala kwixesha elizayo buyiselo, ezifana mboleko kwakhona cinga njengomnye ukhetho.
Kwakhona, xa isishwankathelo yakho, ekukhutshweni kwemali-mboleko kuphela, kuphela owukwazi ukuboleka ngokubanzi imali eseleyo imali ufuna babhatale. Ukuba kungenzeka ukufumana i-mboleko entsha, kubalulekile ukuba ukhethe-mboleko bathengwa olongezelelweyo. Kwakhona wabona iinkonzo mboleko, engazanga longeziwe. Ukuba uziva ixhala kwixesha elizayo buyiselo, ezifana mboleko kwakhona cinga njengomnye ukhetho.
Kwakhona, xa isishwankathelo yakho, ekukhutshweni kwemali-mboleko kuphela, kuphela owukwazi ukuboleka ngokubanzi imali eseleyo imali ufuna babhatale. Ukuba kungenzeka ukufumana i-mboleko entsha, kubalulekile ukuba ukhethe-mboleko bathengwa olongezelelweyo.